फ्रेवुअरी | 2010 | manka kura
Archive for फ्रेवुअरी, 2010
फ्रेवुअरी 25, 2010
अली सन्चेा नभएर घरमै वसी रहेकेा थिए । यसपाला धान काट्रने वित्तिक्कै घर ’roundका खेतहरूमा गहुंकेा डल्ला काट्रने, गहुं छर्ने मेलेा मेसेा चलेकेा थियेा । अाकाशे खेती हुने येा टारीखेतमा डल्ला चिसेा हुंदै गहुं नछरे नउम्रने डरले सवैतिर गहुं छर्नेकेा चापाचापनै थियेा । केादालेाकेा ट्याङ टुङ अावाजसंगै खेतालाहरूले डल्ला काट्दै कुरा गरिरहेकेा अस्पषट सुनिन्थ्येा । कहीले महिलाहरूकेा हांसेाकेा खित्का पनि सुनिन्थ्येा । टिर..टिर…टिर..टिर ..गर्दै केाठावाट फेानकेा अावाज अायेा । फेान रिसिभर उठाउन पुग्दा नपुग्दै फेान कराउन छाड्येा । कस्केा फेान हेाला , अा अावश्यक पर्नेले फेरी गरिहाल्छन् नी भन्दै फर्कीन लागेकेा थिए,फेरि टिरटिर…टिरटिर…. गरेर घंटी वजिहाल्येा । हलेा …भनेर अैापचारिकता निभाए । उतावाट अलि हतारिएर एक जना महिला हलेा ..हलेा .. भनेर चिच्यार्इ रहेकेा स्वर सुने । किन? के भयेा, ‘ केा वेाल्नु भएकेा हेा’ , मैलै भने । महिलाले निस्सासिंदै भनिन्र ‘कविर वावु वित्नु भएछ, झटृ अाउनु पर्येा ।’ प्रत्युत्तरमा मैले केही वेाल्न नपाउंदै उतावाट ती महिलाले फेरी भनिन् ‘सुन्नु भेा पाखा नजिककेा कविर वावु क्या ‘। ‘ए.. हुन्छ म अार्इ हाले ‘ भन्दै थिए फेान राखिदिर्इ हालिन् । यस्तेा वेलामा नपुग्दा भेाली फेरी समाज र उनका अगाडी टाउकेा निहुराउने काम किन गर्ने भनेर म सन्चेा नभए पनि झटपट जुत्ता हुलेर हिंडी हाले । येा अापतकै घटना वाहेक अरू केही भएकेा भए म त्यस दिन वाहिर निस्कने मुडमा पनि थिइन ।
झन्डै दुर्इसय मीटर वाटेा हिंडेकेा मैले पत्तै पार्इन । मेरा मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले । विरामी परेकेा , थला परेकेा त्यस्तेा त केही थिएन । दुर्इ तीन दिन अघि त्यही घर अघिकेा वाटेा वनाउने सिलसिलामा त्यहां पुग्दा राम्रै अवस्थामा देखेकेा हेा । तीसंग हार्इ हलेा भएकै हेा । के भएछ, भर्खर लाउ लाउं ,खाउं खाउं भन्ने जवानीमा उक्लेका मानिसलार्इ मरिहाल्ने के रेाग लागेकेा हेाला । यस्तै कुरा सेाच्दै म घर छेवैमा पुगेछु । केही मानिसहरू जम्मा भै सकेका रहेछन् ।
मानिस छानामाथि जम्मा भएकेा देखेर के भएछ भन्ने संकापनि लाग्येा । सरासर घर भित्र पसे । कसैले माथि माथि भनेर वेालाए । भर्खर वनेकेा घर थियेा । भरेङ चढेर माथि के पुगेकेा थिए , म त झसङगै भए । भरेङकेा ढेाका नजिकै भित्तामा कविर अडेस लागे झैं गरि भरेङ ढाक्न हfलेकेा जस्ता मुनिकेा काठकेा वलेामा डेारी लगाएर झुन्डिरहेकेा देखे । उस्का दुवै गेाडाले भुर्इमा छेाएका थिए । घुंडामुनीका भाग केही देाव्रिएकेा थिए । छुस्स दाह्री उम्रेकेा , टीसर्ट र पाइन्ट लगाएकेा , गेारेा वर्णकेा , जीवन देखि वाक्क भएर थकार्इ मार्न गाह्रेाकेा सहारा लागेर वसे जस्तेा लाग्थ्येा । म पुग्दा घरमा कसैकेा पनि रूवावासी थिएन । अामा, श्रीमती छेाराहरू पनि छतमै थिए । सायद सवैका अाखांवाट दु:खरूपी अासु रित्तिसकेकेा थियेा हेाला । ‘ परमेश्वरकेा इच्छा यस्तै रै छ वावु ।हाम्रेा त सर्वनासै भयेा । अव के गर्ने हेला ‘ भनेर अामाले अेाढीरहेकेा मजेत्रेा माड्दै सुकेर अेाभानेा भएका अाखाले म तिर हेर्दै भनिन् । ‘अहेा कसरी यस्तेा घटना भयेा ।’ मैले सकि नसकि उनका सामु अाफना जिज्ञासा राखे । ‘ सदा झैं विहान उठ्नु भएकेा थियेा । हामीलार्इ त केही पत्तै भएन वावु ‘ उनकी जीवनसाथीले भनिन् । ‘ पुलिसलार्इ खवर भयेा त ‘। मेरेा प्रश्नकेा प्रत्युत्तरमा त्यही रहेका अर्काले वेाले खवर भै सक्येा । ‘ कस्तेा दुखदार्इ नसेाचेकेा घटना पनि देख्न पर्छ ‘ छिमेकी दाजुले भने । हामीसवै हामीवाट टाढा भै सकेका कविरकेा लासलार्इ ट्वाल्ल परेर हेरीरहयैा ।
सरकारी अफिसमा खरिदार सम्मकेा जागिर भै सकेकेा मानिस । सम्पत्ति पनि नभएकेा हैन । खान लाउन पुग्ने नै हुन् । वच्चावच्चीकेा कुरा गर्ने हेा भने पनि छेारा छेारी दुवै छन् । भार्इ पनि घरकेा सहयेागीनै थियेा । हैन किन मानिसहरू यसरी अात्महत्या गर्छन् । यती सुन्दर मानव जीवनलार्इ मानिसले किन नवुझेकेा हेाला । संसारमा एक पटक जन्मने चेालालार्इ यति सस्तेा किन ठानेका हेालान् । हैन अरू कसैकालागि केहीगर्न नसके पनि केवल अफनेा लागि त वांच्नु । सक्न्रेले परिवारकेा लागि वाच्नु , अझ सक्नेले समाजकेा लागि वाच्नु । अझै सक्नेले देशकै लागि केहीगर्ने हिम्मत लिएर वाच्नु । जीवन संघर्ष हेा भन्ने वुझ्दा वुझदै जीवनदेखि हारेर किन मानिस यसरी मर्न खेाज्छन् । त्येा दृश्य देखेर मेरा मनमा यस्तै कुरा सलवलाए । म निकै भावुक वनेछु ।
थानावाट दुर्इजना प्रहरी घटनास्थल अार्इपुगेकेा एकछिनपछि अरू पनि अार्इपुगे । मृत्युकेा खवर यतिवेलासम्म एककान दुर्इकान मैदान भै हाल्येा । हेर्न अाउनेकेा भिडभाड लागिहाल्येा । घर माथिकेा पाखावाट हेर्नेहरूकेा पनि तांती लागिसकेकेा थियेा । प्रहरीहरूले फेाटेा लिने देखि सर्जमिन मुचुल्का गर्ने सवै काम सके । मैले जनप्रतिनिधीकेा नाताले र अरू चार पांच जनाले सही गरिदियैा । धेरै अकाल मृत्युहरूमा यी हातहरूले सर्जमीनमा सहीछाप गर्न परेकेा कुराले विगतका घटनाहरूलार्इ सम्झायेा ।
सव वाहन अार्इपुगेकेा थिएन ।अरू अा अाफना काम कुरा गरिरहेका थिए । मलार्इ भने विभन्न तर्कना त्यहा वसुन्जेल अार्इरह्रयेा । विहानसम्म जिउंदेा भएकेा शरीरले रातभर त्यस्तेा के कुरा कल्पना गरेकेा हेाला । अाज एका विहानै जान परिवार, श्रीसम्पत्ति, सारा कुरा छेाडेर कसरी मर्ने टुंगेामा पुगेकेा हेाला । कसैकेा पनि मायाले मृत्युलार्इ छेक्न नसक्ने गरि कुन कुराले येा मनलार्इ के ले डेाराएकेा हेला । अहेा गजवकेा कुरेा छैन त । केाठामा सुतेकेा मानिस मृत्यु वरणगर्न अाफनै हातले अाफनै गलामा मृत्युकेा फन्दा राख्न भरेङ चढ्दै जान सक्ने, यस्ता मानिसलार्इ साहसिलेा भन्नेकि समस्यावाट डराएर कातर भएकेा भन्ने । छ्या.. के तर्कना अाएकेा भन्दै म अाफु सम्हालिन खेाजे ।
वाहिर फेर उस्केा मृत्युमा विभिन्न मानिस विभिन्न कुरा गर्न थाले । केही भन्थे समस्या अार्इपर्दा समस्यासंग जुध्ने अथवा त्यससंग मुकाविला गर्दै अगाडी वढ्रन सक्ने अाट नभएकाहरू यसरीनै मर्ने गदर्छन्र रे । अर्काथरी भन्थे अाफनेा दुख व्यथाहरू अाफैभित्र राख्नेहरू, अरूलार्इ नवाड्नेहरू यसरीनै मर्छन रे । केाही भन्थे जागिरे मानिस केही तलमाथि परेर हेा कि वा घरपरिवारकेा माया नपाएर पेा हेा कि । केाही दार्शनिक पारामै भन्थे जीवन वांच्ने क्रममा धेरै सपनाहरू देखिन्छन्र तर सपना प्राप्तिका वाटेा भने त्यति सरल कहां छ र तगाराहरू धेरै हुन्छन् , हन्डर धेरै खानु पर्छ । तगारापार गर्न नसक्ने, हन्डर खान नसक्नेहरूकेा येा सजिलेा मृत्युकेा वाटेा हेा रे ।
केही वर्ष अघि उनकेा वावु मर्दा अामाले क्रिया नवसेकेा कुरामा मेलापाता ,धारा पंधेरामा ठुलेा हल्ली खल्लीनै मच्चिएकेा थियेा । कत्रेा साहस अाफनेा पति मर्दा क्रिया नवस्ने भनेर अेामकार धर्मभित्र रहनेहरू कत्तिले कुरा काटेका थिए । छेाराहरूले भने क्रिया वसे पनि अामाले अघि पछि जस्तै सामान्य अवस्थामा वसेकेा देखेर सवै चकित पेा परेका थिए । एउटा धर्म र संस्कारमा भिजेकेा मानिस अर्केा धर्म संस्कारमा पुगेपछि उनमा भएकेा फेरवदल देखेर यसलार्इ धेरैले पचाउनै सकेका थिएनन् । त्यतिवेलाकेा घटनाले मेरेा हिन्दुसंस्कारले भरिएकेा मन मस्तीस्कले पनि यसै भनेकेा थियेा । धर्म भनेकेा पनि ठुलेा नसा नै पेा रहेछ । कत्तिले समाज वहिस्कार गर्न पर्ने भने , कत्तिले त्यस्तेा कुरा पचाउनै नसकेर यस्तेा पनि धर्म हुन्छ । येा गार्इ खाने धर्म हेा सम्म भने । भन्नेका मुख कस्ले थुन्ने । थुन्दै जांदा अाफै नाङगेा हेाइन्छ भन्दै उनले यी सवै कुरालार्इ सुने नसुनेझै गरि सवै अप्ठेराहरूलार्इ झेलेकि थिइन् ।
कविरका वावु अलि पहिलानै विति सकेका थिए । अामा, श्रीमतीकेा अाशा भरेासाकेा टुहुरेा, उनीहरूकेा धरेाहरू वनिरहेकेा वेलामा उस्केा त्यस्तेा मृत्युले उनका परिवार र उनीहरूलाइ चिन्ने जान्ने सवैलार्इ दुखीतनै तुल्याएकेा थियेा ।
मलार्इ पनि येा घटनाले साहै दुखित तुल्यायेा । भेालीपल्ट विहानै त्यतै पुगेर उनीहरूकेा दुखित मनमा सान्त्वना दिनु कर्तव्य ठानी त्यता हानिए । घरवाट त्यहां पुग्दा सम्मकेा दुरीमा मेरा मन भित्र विविध अारेाह अवरेाह चल्येा । त्यस्तेा अवस्थामा कसरी प्रस्तुत हुने हेाला । अलि भावुक हुने भएकेाले म मा त्यस्तेा तर्कना अायेा । मृतककेा छेारा दश वाह्र वर्षकेा पनि छैन । उ एउटा कुनामा पराल माथि अेाच्छ्यार्इएकेा राडीमा अाफूलार्इ सेतेा कपडाले वेरेर क्रियापुत्रीकेा रूपमा वसिरहेकेा हेाला । वावुकेा नाउमा माटेाकेा भांडेामामाथि दियेा वत्ती वालेर झयाल वा खेापामा राखिएकेा हेाला । अामाहरू ढीकुराकेा लागि चाहिने सामानकेा जेाहेामा हेालान् । श्रीमती पनि छेाराले जस्तै सेता कपडामा वेरिएर सेाकले व्रिहल भएर वसेकी हेालीन् । अाफन्तजनहरू संसार यस्तै हेा , मर्ने त मरेर गए , अव वांच्नेहरूलार्इ सम्झेर वस्नु पर्छ भनेर सम्झार्इ रहेका हेालान् । उमेर पुगेका र लामेासमय थला परेर मरेका मानिसहरूकेा हक्मा त अाफनेा मानिस गुमाउन पर्दा कत्रेा सेाकमा डुवेकेा हुन्छन् । यस्तेा अवस्थाकेा मृत्युमा त सवै सेाकाकुल हुनु स्वभाविक हेा । यस्तै सेाच्दा सेाच्दै म घरकेा ढेाकाभित्र पुगेछु । घर सुनसान छ । केाही मानिस छैन । केाठामा केही वच्चाहरू खेलीरहेका छन् । ढेाकाभित्र छिरे । म अन्तपेा अार्इपुगे छु कि जस्तेा पनि लाग्येा । केटाकेटीकेा अगाडी टीभी भने वजिरहेकेा थियेा । क्रियापुत्रीकेा रूपमा कतै केाही वसेकेा देखिन । झयाल खेापाहरूमा पनि दियेामा वत्ति वलिरहेकेा देखिन । केटाकेटीहरू चिया पाउरेाटी खार्इरहेका थिए । म अलि हड्वडाएर केटाकेटीहरूसंग सेाध्छु, ‘ नानी हेा अामा हजुरअामा खेार्इ त ।’ मृतकका छेाराले भने ‘ अामा उता अगाडी खेतमा गहु छर्दैहुनुहुन्छ’ ।’ अनि हजुरअामानि ‘? वहां प्रार्थना गर्न चर्चमा विहानै जानु भयेा ।’ म त छांगावाट खसे जस्तै भए । मेरा सवै सेाचार्इहरू कर्कलाकेा पानीझै सिलित्त चिप्लीए । मैले पत्याउनै सकिन ती अवेाध वालवालिकाकेा कुरा , झयालवाट यसेा हेरे , घर संगैकेा खेतमा मृतककी श्रीमती डल्ला काट्दै रहिछन् । मलार्इ लाग्येा धर्म परिवर्तन पछि रीतिरिवाज र संस्कारमा समयले केाल्टेा फेरि सकेकेा रहेछ । म अाफनै गाउंभित्र भएका परिवर्तनका कुरावाट टाढा भएकेा अनुभूती गरे । खेतमा गएर उनलार्इ अल्मलाउनु पनि उचित लागेन । अनि केटाकेटीहरूसंग विदा हुंदै म पछि अाउंछु है भन्दै लुरू लुरू घरतिर फर्के ।
फ्रेवुअरी 20, 2010
देश उज्यालेा खेाजिरहेछ
वस्ति उज्यालेा खेाजिरहेछ
भएन मन हाम्रेा उज्यालेा
वाल्दछु म त जूनकेा दियालेा ।
घामपछि जुन प्यारेा
लेाडसेडिङ लाग्दैन प्यारेा
रूमलिए नेता अाफैमा
संधै कुर्सीकै खेल खेलमा ।
अंध्यारेामा कत्ति राख्छैा
देश उज्यालेा मागिरहेछ
विश्वमै हामी धनी पानीकेा
वत्तिमुनी संधै राज अंध्यारेाकेा ।
अंध्यारेा केाठा मन पर्दैन
दियालेा जलाउन सक्दिन
कंक्रिटकेा शहरमा छु
टुकीसंग वांच्ने गर्छु ।
फ्रेवुअरी 13, 2010
रामवहादुरसंग मेरेा भेट भयेा कि यसेा वसिवियालेा चलीहाल्छ । अाज पनि उनीसंग भेट भयेा । हामी दुवै जना चियापसलतिर लाग्यैा । चिया सुर्काउदै उनले कुरा सुरू गरिहाले । हेर्नुस सर, हाम्रेा गाउंमा अस्ती एउटा पत्याउनै नसक्ने घटना घट्येानी ।
कस्तेा घटना हेा त्येा पत्याउनै नसकिने । सुनैान त, मैले भने ।
त्यही त भनेकेा । अरूले भनेकेा भए म कहां पत्याउने मानिस हुं र, अाफनै अाखाले देख्ने मैाका पाएकेाले पेा सरलार्इ भन्दैछु ।
मैले चियाकेा अर्केा घुट्केा तान्दै रामवहादुरकेा अंाखामा अंाखा जुधाउंदै भने , कुरा चांही के रहेछ, सुनैात त ।
हेर्नेास न , जग्गा जमिन भनेकेा पनि अचम्मैकेा कुरा रहेछ । यसले त वावु, अामा छेारा छेारी, नसनाता, कुटुम्व सवैलार्इ विर्साउंदेा रहेछनी । सानेा टुक्रा भएपनि जग्गा जमिनका कुरामा त मानिस राक्षस वन्न पनि पछि पर्देा रहेनछ । हाम्रेा समाजमा वावुकेा सम्पत्तिमा छेाराहरूकेा वरेावरी हक लाग्ने कुरा पनि गजवकेा नै छ । वावु अामालार्इ हेर्दै नहेर्ने शत्रु समान ठान्ने छेाराहरूलार्इ पनि अंश भने वरेावर दिन पर्ने । दिने नदिने कुरा त वावुकेा खुसीमा छेाडी दिनु पर्ने हैन । रामवहादुर एकै सासमा सवै कुरा सिध्याउन खेाजिरहेका थिए । अनि फेरी थपे वावुले पनि अाफना छेाराछेारीहरूलार्इ पढाउने, लेखाउने, र्इलम लगाउने अनि राम्रा वाटेामा लगाउने कुरामा अनिवार्य गर्नै पर्ने भए पेा हुन्थ्रयेा । वावुकेा सम्पत्ति छेारा छेारी कसलार्इ कति दिने उनले निर्णय गर्न पाउने अनि उनले दिए पाउने नदिए नपाउने भए के हुन्थ्येा हेला । यहां त छेाराहरूले वावु अामालार्इ हेरून्र नहेरून्र सम्पत्ति भने अंशका रूपमा दिनै पर्ने , नपाए जे पनि गर्न तम्तैयार हुने कस्तेा हाम्रेा परिपाटी भन्दै रामवहादुरले कुरेाकेा चुरेा नराखी भूमिका लामै वाध्न थाले पछि, मैले भने हेाइन कुरेा चांहि के हेा सुनैान पहिला ।
कुरेा यही हेा सर, हाम्रा गाउंका देवचा वुढाका दुर्इ छेारा अनि दुर्इ छेारी थिए । रानाका दरवारदेखि विभिन्न ठाउंमा सिकर्मी काम गरेर देवचा देश खाएर शेषा भै सकेका थिए । फर्निचर वनाउने कुरामा अैाधी सिपालु पनि थिए । वेलैमा अाफना चारै सन्तानकेा विवाहवारी पनि गरिदिए । अफनावावुकेा अलिकति सम्पत्ति र पछि अाफैले जेाडेकेा सम्पत्ति समेत दुर्इ छेारालार्इ र अाफुलार्इ अंस भाग लगार्इ दिए । सडककै छेउमा रहेकेा लामेा घरमध्ये अाफु र श्रीमतीले वीचकेा घर लिर्इ दुर्इ छेाराहरूलार्इ दाया वायाकेा घर वांडिदिए । वुढेसकालमा छेारा वुहारीले गरेकेा हेलत्व अरूका पनि राम्रैसंग देखेकाले अाफुलार्इ पनि छेाराहरूसरहकै भन्दा अली वढी जग्गा जमिन उनले राखेका थिए । म र मेरेा श्रीमती मरे पछि खाने तिमीहरूनै हैा, जस्ले स्याहार सुसार गर्छ उसैले खान्छ भनेर देवचा हाकाहाकी नै भनिरहन्थे ।
छेाराहरू भिन्न भएपिछ जेठाले अंश पाएकेा जग्गा वेचेर ड्रार्इभरी काम जानेकाले उसले ट्रक किनेर चलाउन थाल्येा । अर्केाले घर वनाउने काम गर्दै अाएकाले ठेक्का पटृाकेा काम गर्न थाल्येा । वुढाकेा हातमा सिकर्मीसम्वन्धी राम्रेा कालीगढी भएकाले उनले पनि केही वर्ष त दराज,टेवल,मेच,सेाफा अादि अादि वनाएरै गुजारा चलाएका थिए । दिनपर दिन वुढावुढी हुंदै गएपछि उनले काम पनि छाडिदिए । छुटृी भिन्न भएका छेाराहरूले पनि अा अाफना परिवार च्यापेर वस्न थाले ।
विवाह भएर गएका दुवै छेारीहरू पनि सानेा तिनेा काममा नै लागेका थिए । छेाराहरू छुटृी भिन्न भै सकेपछि एक्लेा रहेका वावुअामाकेामा छेारीहरू कामवाट मिलाएर वेला वेलामा अाएर सन्चेा विसन्चेा हेर्थे । छेारा वुहारीले भन्दा छेारीहरूले नै वढी माया गरेकेा देखिन्थ्येा । वुढा ज्यादै हक्की सेाभावका थिए । कसैसंग डराउंदैनथे । वरू उनै देखि सवै डराउंथे । चित्तनवुझेका कुरामा पाखुरा सुर्कदै ,गेाडा वजार्दै कराउंथे ।
देवचा वुढाले काम गर्न छेाडेपछि अाउने वाटेा पनि कतैवाट थिएन । घर व्यवहार चलाउनै पर्ने , चाडवाड मनाउनै पर्ने, तिथीश्राद पनि चलाउनै पर्थयेा । त्यसैले उनले अाफनेा भागमा परेकेा एक टुक्रा जग्गा वेच्ने निधेा गरे । मेालतेाल भयेा । लिने मानिस पनि तैयार भयेा । तर लिने मानिसले छेाराहरू दुवैलार्इ साक्षीमा राखिदिनु पर्छ भन्ने शर्त राखे । उनले यसमा छेाराहरूले त्यस्तेा के अप्ठेरेा पार्लान् र भनेर हुन्छनै भने । मैले सवैकेा भाग छुट्यार्इदि हालेकेा छ , उनीहरूले पनि त अंश पाएका जग्गा वेचिसकेका छन् , मैले केही भनेकेा गरेकेा छैन ।
जग्गा वेच्ने निधेा भएपछि , जग्गा वेच्ने कुरामा छेाराहरूले वखेडा अानाकानी गर्न थाले । किन वेच्न परेकेा । विहान वेलुकाकेा छाक हामी खुवाउंला । दुर्इ छेारा छैां, दुवैतिर वांडीएर एक एक जना वसे पनि हामी पाली हाल्छैां । जग्गा वेच्न पार्इदैन । हामी साक्षी वस्दैनैा भन्न थाले । वुढाले केही ’roundका भद्रभलाद्मी राखेर छलफल गराए । अहं उनीहरू मानेनन् । वुढावुढीलार्इ भने अैाषधी उपचार , खानलाउन अादि अादि गर्दा गर्दै छेारीहरूसंग लिएकेा पैसा वढ्दै गएकेामा अाफनेा हुंदा हुंदै वुढेसकालमा छेारीहरूकेा कमार्इ खाएर मर्न पर्ने भयेा भन्ने चिन्ता लागिरहेकेा थियेा । जग्गा नवेची उनले अरू कुनै उपायवाट तीर्न सक्दैनथे । छेाराहरूकेा अगाडी वुढावुढीकेा केही लागेन अन्तमा जग्गा वेचेर अाएकेा पैसा चारभाग लगाएर लिने कुरामा सहमती गरेर भए पनि जग्गा वेचेर पैसा भाग लगार्इ दिए ।
येा घटनाले वुढावुढीमा वढेा चेाट पुगेकेा थियेा, त्यसपछि वुढी निकै दिन थला परिन् । अस्पतालनै राख्न परेकेा थियेा । वुढापनि झन्डै साता दिन विरामी भए । त्यसवेलामा पनि छेारीहरूलेनै वढी स्याहार सुसार गरे । छेारीहरू यसरी अाएकेा वुहारी र छेाराहरूलार्इ त्यति मन परेकेा थिएन । हामी मरेका छैां र तिमीहरू अाउंछैा । हाम्रेा वावुलार्इ हामी जे गर्न पर्ने गिरहाल्छैा नी भनेर उल्टै हप्काउंथे । यसरी नै दिन चलेका थिए ।
केही समय पछि वुढा निकै थला परे । गुठीयार, नातागेाताहरू हेर्न अाउन थाले । छेाराहरू पनि लेाकाचारकेा लागि देखा परी टेापले । वुहारीहरूले कुरा चुहाउन थाले , वुढा वसेकेा घर छेारीलार्इ दिएका छन् कि कसेा । हैन भने किन अाइरहेका हुन् यिनीहरूलार्इ पनि जत्ति भए पनि नपुग्ने, दाजु भाइलार्इ मारेर खान पल्केका । अादि अादि ।
वुढा इन्तु न चिन्तु भै हन्हन्ती ज्वरेा अाएर सुतिरहेका छन् । वुढी पनि अाखा राम्ररी नदेख्ने, कान कम सुन्ने अवस्थाकी छन् । छेारीहरू ले सहयेाग नगरे, नअाइदिए खानै नपार्इयला जस्तेा भएकेा छ । छेारीहरूले डाक्टर वेालाएर अेाखती मुलेा पनि गरे । हेरचाह स्याहार सुसार पनि राम्रै गरेका हुन् ।
यता वुढा सिकिस्त छन्, उता छेारीहरूलार्इ वुढाले घर पास गरिदिएका छन् रे भन्ने हल्ला सुन्न थालेपछि उनीहरूकेा निद हराम भयेा । सवैकुरा छेाडेर जग्गाकेा काम गर्ने मालपेात कर्यालयमा के हेा कसेा हेा भनेर वुझन गएछन् । कागजपत्रकेा नक्कल सारे पछि केही समय अगाडी हालैकेा वकसपत्र गरि दिएकेा कुरा थाहा लाग्येा । छेाराहरू मुर्रमुरीदैं घरमा अाए । श्रीमतीहरूले झनै अाफना श्रीमानलार्इ उचाल्न थाले । तिम्रेा वाउ कम्तीका छन्, निकै वाउ वाउ भन्थेउ नी, देखेउ कस्ता रहेछन् । अव खाउन । ल है छेाड्ने हैन । येा कुरा त सवैलार्इ राखेर मिलार्इ हाल्न पर्छ । छेारा हुंदा हुंदै यस्तेा गर्न पाइन्छ । यहीवेला हेा गुठीयारहरूलार्इ पनि अाफना पक्षमा लिएर वास त जेागाउनै पर्छ , भनेर कुर्लिन थाले ।
देवचावुढा अन्तीम सास लिएर सुतिरहेका थिए । ज्यादै चापेकेले चेाटावाट उनलार्इ छिंडिमा ल्यार्इयेा । सवैले राम राम भन्न थाले । दिनकेा दुर्इ वजे तिर वुढाकेा प्राण गै हाल्येा ।
वावुकेा मृत्यु पछि छेारीहरू डांकेा छेाडेर रून लागे । उनकि वृद्घ जीवनसाथी अव म कसरी वांच्ने हेाला भन्दै लडिवुडी गर्न थालिन् । उता छेारा वुहारीहरू भने मनमनै पापी असती सजिलैसंग मरेर गयेा भन्दै लास नेर उभिएर टेालायर वसेका थिए ।
हेर्नुस सर, त्यस पछिकेा दृश्य झन् गजव देखियेा नी । गुठीयार वेालाएर लास जलाउने कुरा हेाला भनेकेा त , छेारा नातीहरूले लास लार्इ थपक्क छिंडीवाट चेाटामा पेा लगेर राखे । अनि छेाराहरूले गर्जन थाले, कस्ले लाने येा लास , हाम्रेा घर जग्गाकेा कुरा निमलाउन्जेल लास लान के कसैलार्इ छुन दिइन्न भन्दै उनीहरू वहुलाउन थाले । दुवै छेारीहरू अलमल्लमा परे । छिमेकीहरू पनि जिल्ल परे । गुठीयारकेामा लास उठाउन वेलाउन जाने भन्दा पनि हाम्रेा कुरा नमिलेसम्म नअाउन भन्दै हिंडे । लास उठाइहाल्ने हिम्मत पनि कसैले गरेनन् । गुठीयारहरू पनि सवै फर्के । रात झमक्कै भयेा । दुर्इ छेारी र श्रीमती लासकेा ’round वसेर रात छर्लङग विताए । भेालीपल्ट पनि यसरी नै वित्येा ।
सर, येा अचम्मै हेार्इन त । लैा कही यस्तेा देख्नु भएकेा छ । मेरेा गाउमा घटेकेा जस्तेा घटना । मरेकेा लासलार्इ छिडीवाट चेाटामा राखेर कसैलार्इ अाउन नदि, जग्गा जमिनका कुरा नमिलेसम्म हामी लास उठाउन दिन्नैा भनेर छेारा नाती ले भनेकेा कुरा एक कान दर्इ कान हुंदै गाउंभर फैलियेा । त्यसपछि नजिकका छिमेकीहरूले मिलाउन खेाजे । कुरा मिलेन । वडाका वडाध्यक्षले गाविसका अध्यक्षलार्इ खवर गरे । गाविस अध्यक्षले ’roundका मानिस , वडाध्यक्ष सवैलार्इ राखेर विहानभरी छलफल गराएपछि मिलाउने जिम्मा लिदै, पहिला लासकेा अन्तिम संस्कार गर्ने, काजक्रिया सक्ने अनि त्यसकेा भेालीपल्ट छेारा छेारी, समाज सवै वसेर छलफल गरेर मिलाउने गरि टुंग्यार्इयेा । तर उनीहरू अझै मानेन् । भेाली फेरी अर्कै कुरा हुन्छ । अाजै कागज पनि लेख्न पर्छ मैाखिक कुराले हुंदैन भनेर कराउन थाले अनि अध्यक्षकेा रेाहवरमा कागज लेखेर सवैले सहीछाप गरेर उनलार्इ दिए पछि लास उठाउने सहमती भयेा । मैले पनि साक्षीकेा रूपमा सही गरे सर ।
लैा हेर्नुस कस्तेा रहेछ येा जग्गा जमिन । मरेकेा लास भजाएर छेाराहरूले यस्ता कुरा कसरी उठाउन सकेका हेालान्र । मरेपछि पनि दुर्इ रात तीन दिन सम्म देवचाले अन्तिम संस्कार नपार्इ घरमै प्रेत भएर वस्न परेकेा येा घटना अचम्मैकेा छैन त । चियाकेा अन्तिम घुट्रकेा तान्दै रामवहादुरले भने ।
रामवहादुरकेा गाउंमा घटेकेा येा सांचेा कथा सुनेर म पनि दुखित भए । दुवै जनाले फेरी एक एक कप चिया खाएर म भने अाफनेा मन गहैां पारेर छुटृीयं । अस्तु ।
२०६६ माघ २५
अमेरिकी अदालतमा तीन दिन
फ्रेवुअरी 6, 2010
जनवरी १९ तारिख २००८ शनिवारकेा दिन थियेा । एरिजेानाकेा टुसान शहरकेा 22nd park स्थित 7Eleven store मा काम गरिरहेकेा थिए । शनिवार र अार्इतवार विहान ६ वजेदेखि करिव ११ वजे सम्म स्टेारमा एक्लै काम गर्नु पर्थ्येा । ११ वजे पछि साथीहरू एक दिन प्रेमजी र अर्केा दिन हिरामणी अाउनुहुन्थ्येा । यी दुर्इ दिन म स्टेारमा १२।१२ घंटा काम गर्थे । करिव सवा नैा वजेकेा हुंदेा हेा । स्टेारमा चार पांच जना ग्राहकहरू सामान लिएर पैसा तीर्न रजिस्टरकेा अगाडी लार्इनमा वसिरहेका थिए । म उनीहरूकेा सामान स्क्यानिङग गर्दै पैसा लिदैं वील दिंदै विदा गर्दै थिए । लार्इनमा एक जना भर्खरकी १९।२० वर्षकी जस्ती देखिने राम्री मेक्सीकन जस्ती केटी पनि लार्इनमै थिइन् । उ पछाडी अरू दुर्इजना अमेरिकनहरू लाइनमा थिए । ती केटीले क्यामल फिल्टर चुरेाट किन्न चाहिन् । त्यतिवेलै मेरेा मनमा चेक अाएकेा हेा कि भन्ने संका पनि उव्जीएकेा थियेा । मनमनैले फेरी भन्येा नहुन पनि सक्छ । चुरेाट रहेकेा केस वाट चुरेाट झिक्दै गर्दा, हेर्दा त १८ वर्ष भन्दा माथिकै देखिन्छे भन्ने तरङग पनि मनमा नअाएकेा हेार्इन । मैले ती केटीसंग कृपया तपार्इकेा ID दिनुहेास् भने, उसले तुरून्तै ID दिर्इ । सेा हेर्दै उसकेा अनुहार तिर हेरें । दुर्इ दुर्इ जना ग्राहक लार्इनमा छन् तीनलार्इ चुरेाट दिउं कि नदिउं मलार्इ देाभन भयेा । विहानै अाएकेा मानिसलार्इ किन फर्कउने भन्दै चुरेाट दिनु अघि फेरी उसकेा ID हेरें । कार्डमा Date of Birth 1989 देखें । तपार्इकेा उमेर यही नै हेा भनेर सेाधें । उसले फिस्स हांस्दै मुन्टेा हल्लार्इ हेा भन्ने संकेत गरि ,मैले पैसा लिएर चुरेाट र ID उसलार्इ फिर्ता दिए । त्यति वेलासम्म उ पछाडीरहेकेा एक जना कस्टमर वाहिर जाने ढेाका सम्म पुगि सकेकेा रहेछ । एक जनाले यस्तै के किनेर वाहिरियेा । कताकता मनमा डर लागि रहेकेा पनि थियेा ।
झन्डै एक महिना अघि मेरै सिफ्टमा काम गर्ने मेक्सीकन केटीले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी केटीलार्इ चुरेाट वेचेर टिकट पाइसकेकी थिइन् । उ संगकेा सिफ्टमा काम गर्न परेकेा दिन चुरेाट, रक्सी। विएर वेच्न पर्दा मलार्इ वेालाउंथी । फेरी झुक्किएर वेचिएला देास्रेा पटकमा परिएला भनेर । यसै क्रममा एक हप्ता अघि एकजना १७ वर्ष अाठ महिना मात्र पुगेकेा केटा चुरेाट किन्न अाएकेा थियेा । अठार वर्ष नपुगेकेाले चुरेाट दिन सक्दीन भनी सरी भन्दै फिर्ता पठाएकेा थिए । त्यस दिन पनि चेक अाएकेा रहेछ । त्येा केटा स्टेार पछाडी पटृी पार्किङगमा रहेकेा पुलिसकेा गाडीमा चढेर गएकेा थियेा । हामी दुवै जनाले त्यस दिन जिव्रेा टेाकेका थियैा । त्यसरी चेक अाउंदा फिर्ता पठाउन सकियेा भने स्टेारकेा नाममा सहयेागकेा लागि धन्यावाद सहितकेा पत्र अाउंथ्येा । यीनै कुराहरू मनमा खेल्दै थिए । दुर्इ जना मानिस हातमा कागज लिएर भित्र पसे । यति वेला म रजिस्टरमा नभै कफि सिद्घिएकेाले त्यता मेसीनमा हेदै थिए । यसै वेला साथी प्रेमजी पनि अाउनु भयेा । उनीहरू सरासर मेरेा सामुन्ने अाएर १८ वर्ष नपुगेकेा केटीलार्इ चुरेाट वेचेकेाले टीकट दिन अाएकेा भन्दै मेरेा Social Security नम्वर र नाम सेाध्न थाल्येा । मैले शुरूमा त प्रतिवाद गरे , हैन उ त १९८९ केा हेा । १९ वर्षकि थिर्इ । मैले उसलार्इ जन्म मिति सेाधेकेा पनि थिए। उसले हेा भनेर भनेकी थिर्इ । प्रेमजीले पनि केही कुरा राख्नु भेा । वहां हाम्रेा मैनेजर पनि हुनुहुन्थ्रयेा । वहांले हामी त्येा केटी हेर्न सक्छैा भन्नु भयेा । तर केटीलार्इ पुन देखाउन मिल्देा रहेन छ । वेच्ने मानिसले ID राम्रेासंग चेक गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उसले राख्येा । वास्तवमा ID अनुसार उ १७ वर्ष पांच । छ महिना मात्र भएकी रहिछ । त्यतिवेला कार्ड हेर्दा मेरेा दृस्टी भ्रम भएछ ।
अमेरिकामा रातकेा दुर्इ वजेवाट रक्सी, वीएर वेच्न नपाइने कानून छ । अार्इतवार विहान १० वजे र अरू दिन विहानकेा छ वजे पछि मात्र रक्सी वेच्न पाइन्छ । २१ वर्ष मुनिकालार्इ रक्सी ,वीएर,चिठृा (Lottery ) वेच्न पार्इदैन । त्यस्तै १८ वर्ष मुनिकालार्इ चुरेाट, सलार्इ वेच्न कानूनले प्रतिवन्ध लगाएकेा छ । रक्सी चुरेाट जस्ता पदार्थ सिधै वा सरल तरिकाले केटा केटीहरूकेा हातमा सर्वसुलभ रूपमा पुग्न नसकेास् । उनीहरू अाफैले रक्सी चुरेाटकेा वारेमा वुझ्न नसकुन्जेल ती वस्तु सजिलै प्राप्त गर्न नसकुन् भनेर यस्तेा नियम वनाइएकेा छ । यस्तेा गर्दैमा केटा केटीहरूले चुरेाटनै खांदैनन् भन्न त सकिन्न । उमेर पुगेकाले वा ID भएका तीनका साथीहरूले किनेर लगि उमेर नपुगेकाहरूले खुव धित मारेर खार्इ रेहेकेा भने पार्इन्छ । यता मानिसले चुरेाट खाएकेा देख्दा नव्वे प्रतिशतलेनै चुरेाट खान्छन् कि भन्ने जस्तेा लाग्छ । यस्मा पनि केटीहरूले त अझ वढी खाएकेा देखिन्छ । तर उमेर नपुगेकाले चुरेाट खार्इ रहेकेा अवस्थामा पुलिसले भेट्दा भने कानूनी कारवाही वेच्ने र खाने दुवै माथि हुन्छ । केटाकेटीहरू अाफु १८ र २१ वर्षकेा पुगेपछि अाफुलार्इ स्वतन्त्र भएकेा ठान्छन् ।१८ वर्ष पुगे पछि चुरेाट खान पार्इयेा । वावु अामाकेा अन्डरमा वस्न नपर्ने भएकेा र २१ वर्ष मा रक्सी वीएर किनेर खान पाइने भएकेा ले केटा केटीहरू १८ र २१ वर्ष पुगेकेा दिन रमार्इलेा गरेर मनाउन पनि पछि पर्दा रहेनछन् ।
उनीहरूले दिएकेा अारेाप पत्रलार्इ लिएर म पहिलेा पटक जनवरी ३०,२००८ मा टुसान सीटी केार्टमा तेाकिएकै समय अाठ तीस वजे पुगे । पहिले त म नजिकै रहेकेा हार्इ केार्टमा पुगेछु ( अघिपछि सवैले केार्ट यही हेा भनेर भनेका हुनाले )। हार्इकेाटकेा भित्र जाने ढेाका सम्म पुगेर सवै कुरा जांज गरार्इ मैले सीटी केार्टकेा अारेापित पत्र देखाएपछि उसले येा त हार्इकेार्ट हेा भन्येा । टुसान सीटी केार्ट वाहिर छ भनेर जाने वाटेा वतार्इदिए । वाहिर निस्केर केहीलार्इ सेाध्दै म सीटी केार्टमा पुगे । त्यहां पनि सम्पूर्ण शरीर चेक जांच पछि मात्र भित्र पस्न पार्इयेा । मेरेा मुद्घा २ नं. वेच्नमा परेकेा रहेछ । नेपालमा जस्तै त्यहा पनि मुद्घाकेा लिस्ट भित्तामा झुन्ड्याएर राखिएकेा रहेछ । न्यायाधिश Hon, Thoms Berning केा वेन्चमा परेकेा थियेा । म माथी लागेकेा येा मुद्घामा पांच सय डलर सम्म जरिवाना र ३ वर्ष सम्म रेकर्ड रहने रहेछ ।
येा वर्ष स्टेारमा टीकट पाउने म देास्रेा व्यक्ति भए । एकै वर्ष लगातार ३ पटक स्टेारले टीकट पाएमा स्टेारमा चुरेाट वेच्न नपाउने गरि रेाक लगाउने सम्मकेा कारवाही हुंदेा रहेछ । २१ वर्ष मुनिकालार्इ रक्सी वीएर वेचेकेा अवस्थामा झन् कडा सजाय खेप्नु पर्देा रहेछ । दुर्इ पटक लगातार सम्म एउटै व्यक्तिले यस्तेा नियम उलंघन गर्दा त स्टेारवाटै हतकडी लगाएर लाने रहेछन् । टुसान मा एकजना नेपालीलार्इ यस्तेा केसमा हतकडीनै लगाएर पुलिसले लगेकेा कुरा पुराना साथीहरूले सुनाउथे । अमेरिकाकेा राम्रेा पक्ष येा पनि हेा , कानूनकेा पालना सवैले राम्ररी गर्नु पर्ने नगरे कानूनले कसैलार्इ नछेाड्ने । कानूनकेा उल्लंघन गर्ने माथि कडार्इका साथ छिटेा कानूनी कारवाही हुने रहेछ । रेकर्ड सिस्टम राम्रेा भएकेाले जसले नराम्रेा जे काम गरे पनि उसकेा रेकर्डमा रहने व्यवस्था रहेकेा रहेछ । अमेरिकी नागरिक वा यहां वसेावास गर्ने सवैले अाफनेा पक्षमा केाही नभए पनि कानून छ , अदालत छ यसले न्याय दिन्छ भन्ने अास्था र विस्वास अाम रूपमा रहेकेा पाइन्छ ।
न्यायाधिशकेा देव्रे तर्फ रहेकेा कर्मचारीले मेरेा नाम वेालाए पछि म उनकेा टेवल अगाडी उभिए । उनले मेरेा नाम, जन्ममिति र काम गर्ने ठाउं सेाधे । इन्टरपेटर चाहिने हेा भनेर सेाधे । मैले हेा भने । उनले भाषाकेा वारे सेाधे मेरेा मदर टंग नेपाली हेा भने । मसंग कुरा गर्दै उसले कम्प्युटरमा अाफनेा हात चलार्इ रहेका थिए । उसले न्यायाधिश तर्फ हेरेर केही वेाल्येा र मलार्इ उता जान संकेत गरे । संगै रहेका न्यायाधिश सामु । उनेले म माथि लागेकेा चार्ज पढ्दै त्यस वारे अर्केा दिन वहस हुने हुंदा Monday ,February,25,2008 का दिन दिनकेा ३ वजे केार्टमा उपस्थित हुने अाउने कुरा सुनाउंदै एउटा पेपर दिए ।
तीनिहरूकेा व्यवहारमा अात्मीयता थियेा । निकै राम्रेा लाग्येा । मेरेा लागि येा रमार्इलै घटना भएकेा मैले महसुस गरें । मलार्इ त्यहांकेा वारेमा केही जान्ने नया नयां कुराकेा अनुभव गर्ने जिज्ञासा भएकेाले । तत्पश्चात म स्टेारमा हेासियार भएर अाफूलार्इ संका लागेका सवैकेा ID हेरेर मात्र चुरेाट ,वीएर वेच्न थाले । काम गर्दाका सुरू सुरूमा त ID माग्न पनि डर लाग्ने , केही भन्ने हुन्र कि भनेर । यस दिनवाट मलार्इ अर्केा कुरा के थाहा भयेा भने ID दुर्इ अाकारमा हुंदेा रहेछ । २१ वर्ष नपुग्दै वनाएकेा ID ठाडेा सार्इजकेा हुने र २१ वर्ष पुगेपछि वनाएकेा ID लामेा तेस्रेा अाकारकेा हुने रहेछ । दुवै ID देखेपनि यसकेा भिन्नता वारे मलार्इ त्यतिवेला सम्म थाहा थिएन । रक्सी वीएर चुरेाट अादि किन्नेहरूकेा ठाडेा ID देखेपछि भने अलि सजग भएर देाहेार्रयार्इ तेहर्रयार्इ हेर्न थालियेा । रक्सी वीएर चुरेाट अादिकेा स्क्यानिङग गर्ने वित्तिक्कै कम्प्युटरमा ID चेक गर भनेर संकेत दिन्छ । जन्ममिति टार्इप गरिदिएपछि दिन हुने नहुने छुट्रयार्इ पनि दिन्छ ।
देास्रेा पटक तेाकिएकेा दिन र समयमा गेाविन्ददार्इ ( श्रेस्ठ ) लार्इ साथ लिएर केार्ट पुंगे ।( प्राय मानिसहरू यस्ता कुरा अरूलार्इ भन्दा रहेनछन् )। यस पटक माथिल्लेा तल्लामा रहेकेा अर्कै वेन्चमा अर्कै न्यायाधिसकेा सामु उपस्थित भर्इयेा । वेन्चमा मुद्घा सुनाउनु भन्दा अघि सरकारी वकिलले एउटा फर्म भर्न लगाए । त्येा घटना भएकेामा गिल्टी ( गल्ती ) महसुस गरेकेा कुरा पनि त्यसमा लेखियेा । मैले एउटा क्लास लिनु पर्ने कुरा वताए । न्यायाधिश ले नाम वेालाए मैले नागरिक कर्तव्य वारेकेा एक दिन ट्रेनिङग लिएर सेा केा सर्टीफिकेट पेश गरेपछि मात्र मुद्घा रेकर्ड नरहने गरि ढिसमिस हुने अन्यथा कानून वमेाजिम कारवाही हुने भनि सुनाए । मैले त्यसलार्इ सहर्ष स्वीकारे । टाउकेा हल्लाए र धन्यवाद हनरेवल जज भनेर वाहिरिए ।
त्यसै दिन ट्रेनिङगकेा लागि त्यहांकेा पत्र लिएर हामी दुवै जना डाउन टाउन मा रहेकेा ट्रेनिङग सेन्टरमा पुग्यैा । त्यहां थुप्रै मानिसहरू थिए । केाही लागु पर्दाथका दुर्व्यसनीहरू , जेल परेकाहरू र उनीहरूका परिवार तथा मेरेा जस्तेा मुद्घाकेा एकाध जनाकेा उपस्थिति थियेा । त्यहा सम्पर्क गरेपछि हामीलार्इ चारपांच पानाकेा अव्जेक्टीभ प्रश्नपत्र भर्न लगाइयेा । दुवै जना मिलेर त्येा प्रश्न भरेर वुझायैा । उनीहरूले कम्प्युटरमा केही कुरा राखिसकेपछि मैले झन्डै तीन हप्ता पछिकेा तालीमकेा लागि समय पाए । यी सवै काम गर्न मेरेा तीनसय डलर जति खर्च भयेा । तीन दिन कामवाट छुटृी लिन पर्येा ।
उक्त एक दिने ट्रेनिङगमा नागरिककेा कर्तव्य र पालना गर्नु पर्ने कुरा र कानूनवारे एक जना ट्रेनरले चार पांच घंटाकेा क्लास लिए । छलफल र पेपर वर्क गर्न लगाए । हुन त मैले त्यस दिनकेा क्लास वारे भाषाका समस्याले दश प्रतिशत कुरा पनि वुझिन , दिएकेा पेपर पढेर केही कुरा थाहा पाए ।
अन्तमा ट्रेनिङग पछि मैले अदालतले तेाकेकेा दिनमा उपस्थित भए । टेाकन लिएर वसेकेा केही समय पछि हलभित्रकेा एउटा झ्रयालवाट टेाकन नम्वर वेालार्इयेा । सेाधपुछ गर्ने एकजना महिलाकेा अगाडी दिएकेा सर्टीफिकेट पेश गरे । उसले कम्प्युटर खेाल्दै अनि मुस्कुराउंदै तपार्इकेा मुद्घा अाजवाट डीसमीस भयेा , वधार्इ भन्दै हात मिलार्इन् । यसरी मैले सानेा गल्ती गर्नाले तीन दिन सीटीकेार्ट धाउनु पर्येा । तीनसय डलर खर्च गर्नु पर्येा । शुरूका केही दिन मानसिक तनाव व्यहेार्नु पर्येा । ट्रेनिङग नतेाकि जरिवाना गरिदिएकेा भए मेरेा तीन वर्ष सम्म रेकर्ड रहन सक्थ्येा । तर सानेा गल्ती गर्नाले मैले यस सम्वन्धि एउटा रमार्इलेा अनुभव गर्न पाए ।कहीले कांहीकेा गल्तीले पनि धेरै कुरा सिकाउंदेा रहेछ । यसैमा मलार्इ खुसी लाग्येा । अपरिचित र अर्काकेा देशमा सवैवाट सिस्ट व्यवहार पाएरकेा मा र कुनै झन्झट व्यहेार्न नपरेकेामा त्यहांकेा सिस्टम देखि भने लेाभ नै लाग्येा । अस्तु ।
फ्रेवुअरी 2, 2010
कुरा अलि पहिलाकै हेा । चन्द्रवहादुरका वावुका चार दाजु भार्इ थिए । एउटा छेारा वावुअामासंग वसेर अरू छेाराहरू समयमै छुटृी भिन्न भए । चन्द्वहादुरले छुटिृभिन्न भएपछि अंस पाएकेा जग्गामा सवैसंग हार गुहार गरेर राम्रै टायलकेा छानेा र पाली भएकेा दुइतले कच्चिघर वनाए । चन्द्र वहादुर रवाफिला थिए । उनलार्इ वुझ्रनेहरू रमार्इलै मान्छे ठान्थे । कसैसंग कुनै कुरामा झुकिहाल्ने उनकेा स्वभाव थिएन । उनी अाफुलार्इ राजनीति देखि कुटनीति , धार्मिक देखि कानूनकेा व्याख्याता नै सम्झन्थे । गाउंघरका दुर्इ चार वटा पसलमा उनकेा उपस्थिति सधै जसेा हुनेगर्थ्येा । चियाकेा सुर्के लगाउंदै अाकास देखि पातालसम्म चलेका गफमा उनकेा सहभागिता हुन्थ्रयेा । उनले नछेाएकेा , नजानेकेा कुनै विषयवस्तु नै छैन भने झै हरेक कुराकेा छेउटुप्पा मिलाउंथे । अरूले उनका कुरा काट्न पनि रिसार्इ हाल्लान् कि भनेर वरू सुनेरै वसिदिन्थे । केटाकेटीहरू त उनकेा गर्विलेा अावाज देखि परपरै भाग्थे ।
सरकारी कार्यालयमा खरिदारसम्मकेा जागिर पार्इसकेका थिए उनले । अंश पाउंदा छअाठ महिना खान पुग्ने खेतवारी पैतृक सम्पत्तीवाट पाएका थिए । सानेा परिवार थियेा । उनकेा गुजारा राम्रैसंग चलेकेा थियेा । घरलक्षमी पनि वडेा स्वभावकी सवैलार्इ यथेाचित मानमर्दन गर्न जान्ने थिइन् । उनकेा वेाली वचनले सवैलार्इ मख्ख पार्थ्येा । लेाग्नेकेा अानीवानी र स्वभाव उनलार्इ राम्रै थाहा थियेा ।
चन्द्रवहादुरसंगै जागिरभएका सहपाठीहरूले जागिर कसरी खाने जानेका थिए । विभिन्न दाउपेच लगाएर राम्रा राम्रा ठाउंमा पुगेर कुस्तै कमाएका पनि थिए । अाफुलार्इ उनी निकै टाठेा वाठेा सम्झे पनि त्यस्ता कुरावाट भने उनी टाढै थिए । उनकेा कसैसंग नलत्रने र नझुक्ने स्वभावले पनि हेाला ।
सगेालमै छंदा उनकेा जेठी छेारी जन्मिसकेकी थिर्इ ।चन्द्रवहादुर हटृा कटृा र फुर्तिला थिए । वाक्लेादाल खान थालेदेखि वर्ष डेढवर्ष विराएर वच्चा जन्मने क्रममा लगातार छवटी छेारी जन्मिसकेका थिए । परिवार वढ्रदै गएकेा र महंगी अकासिएकेा अवस्थामा उनकेा जीवन दिनपरदिन दुखेलेा वन्दै थियेा । त्यसमाथि छेारा नभएकेामा उनी वडेा वेचैनी थिए । लक्षमीजस्ती स्वभाव र रूपले भरिपूर्ण भएकी अाफनी श्रीमतीसंगकेा व्यवहारमा पनि फरक र रूखेा हुंदै गएकेा थियेा । लक्षमी जस्ती स्वभावकि उनले ती सवै कुराहरूलार्इ हांसेरै टारिदिन्थीन् । लेाग्ने अागेा भएकेा वखत अाफु पानी भै दिन्थिन् । मुख फर्काउने भन्दा पनि हांसेरै चुप लागेर वसिदिने उनकेा वानि चियेा । चन्द्वहादुरलार्इ श्रीमतीले छेारा नपार्इदिएकेामा वडेा दुख थियेा । छेारा नभएकेामा स्वर्गकेा द्घार नखुल्ने कुराले उनी चिन्तित थिए । उनी छेारीहरू जन्मेकेामा पटक्कै खुसी थिएनन् ।
एउटा छेाराकेा अाश गर्दा गर्दै छवटी छेारी पछि वल्ल छेारा जन्म्येा । यसपटक चन्द्रवहादुरकेा खुसीकेा कुनै सिमै रहेन । उनी पुग्ने चियापसलहरूमा उनकेा रवाफले वेग्लै चमक्ता पायेा । हरेक पसलमा पुग्दा उनले दुर्इचार कप चियाकेा पैसा तीर्न पनि कुनै कन्जुस्यांर्इ गरेनन्र ।
तीनजनाकेा गुंड लिएर वेग्लै वस्न शुरू गरेका चन्द्वहादुरकेा परिवारमा अहिले खाने मुखहरू नैा नैा जना छन् । जेठीछेारीकेा विवाह वेलैमा संचयकेाष सापट लिएर गरिदिएकाले उनकेा जागिरवाट पनि पुरै खरिदारकेा तलव पाउंदैनथे । छेारी भने पछि मननै नपराउने उनले छेारी हरूलार्इ स्कुलमा पढाउने विषयमा पनि त्यति चासेा लिएनन् । छेारी भनेकेा अार्काकेा भित्ता टाल्ने जाने वा अर्काकेा घर जाने जातलार्इ के पढाइरहनु, छेारीले पढेर फेरी के नै लर्छाछन् भन्दै हिंड्रथे । त्यसवेला जाने वुझेका परिवार वाहेक सवैमा यही चिन्तन त थियेा । चन्द्र वहादुर पनि यसवाट अछुतेा थिएनन् ।
अाशैअाशकेा वाध्यताले छवटी छेारीकेा जन्म दिएका चन्द्रवहादुरलार्इ छेारी जवान हुंदै गएपछि अझ पिरलेा माथि झन् पिरलेा थपियेा । उता जहान पनि एक हप्ता सन्चेा भए दुर्इहप्ता थला पर्न थालेकि थिर्इन् । वावु राजा भन्दै सवैकेा लाडप्यारमा हुर्केकेा छेारेा पनि स्कुल जाने भै सकेकेा थियेा । छेारालार्इ वेलैमा नजिकैकेा स्कुलमा भर्ना गरिदिएपछि चन्द्रवहादुरले अाफनेा नाक घिरैाला जत्रेा भएकेा सम्झे । चिया पसलमा वावुकेा कर्तव्य त पुरा गर्नै पर्छ भनेर गुडृी हांके । छेारालार्इ पनि उनले सानै देखि अाफनै अदपमा राखेका थिए ।
चन्द्रवहादुर विरामी परेका वखत वाहेक जागिरमा एक दिन पनि गयल नहुने उनकेा वानि थियेा । शनिवार विदा परेका दिन पनि उनी विहान खाना खाए पछि वेलुका मात्रै खाना खान घरभित्र पस्थे । कहिले कांही तास खेल्ने उनकेा वानी थियेा । धेरै जसेा भने खेलेका ठाउंमा हेरेरै दिन विताइदिन्थे । घरकेा यताउता काममा सहयेाग गर्ने , श्रम गर्ने उनकेा पटक्कै अादत थिएन । उनीवाट वरकेासिन्का पर पनि सर्दैनथ्येा । उनकेा दिनचर्यामा घर परिवारका कसैले दखल गर्न वा त्यस्मा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैनथे । पुरै घर उनकै अादेशानुसार चल्न पर्थ्येा । त्यसमा तल माथिकेा गुन्जायस नै थिएन ।
पहिलेा विवाहकेा ऋण वल्ल चुक्ता गरेर उन्मुक्तिकेा सास मात्र के फेरेका थिए अर्कि छेारीकेा विवाहकेा लागि नसनाता कुटुम्वले कुरा ल्याइहाले । हुर्किएकी छेारी राख्न हुन्न, घर राम्रेा अाएकेा वेलामा विहे गरिदिर्इ हाल्नु पर्छ भनेर उनमाथि दवाव अाइहाल्येा । केटा सज्जान छ । खेतवारीकेा दुख छैन । घर अगाडी वारिका पाटामा चार चारवटा त वडेमानका परालका कुन्यू छन् । नपत्याए गएर हेरे हुन्छ । अादि अादि भनेर नसनाता अाए पछि उनीकेा केही लागेन । कुरा पत्याएर चन्द्रवहादुरले छेारी दिने निर्णय गरे ।
अागन पेालेरै, छेारीज्वार्इकेा खुटृाकै पानी खाएर छेारी अन्माइ दिए । यस पटक पनि उनले अफिसवाट लिन सक्ने पाउने सुविधा लिएर , नसनातासंग हात फैलाएरै विवाह सम्पन्न गरे ।
घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भनेझैं एक पछि अर्की छेारी तन्नेरी हुंदै जाने र नसनाता कुटुम्ववाट कुरा अाइहाल्ने भएकाले चन्द्वहादुरलार्इ निन्द्रावाट व्युझेदेखि यिनै कुराले सताउन थाल्थ्रयेा । रातकेा समयमा पनि छेारीकै विवाह र साहुकेा ऋण सम्झेर वेलावेलामा वरवराउंथे ।
असेाज महिनामा परेको दशैमा एक महिनाकेा तलव र दशैखर्च पाएपछि मुस्किल मुस्किलले दशैं दशाहुनवाट मुक्ती पायेा । कार्तिकमा विवाहकेा लगन नहुने हुनाले एक महिना अानन्दैसंग गयेा । हींउद लागेपछि केटीका कुरा वर्षा लागेपछि खेतीका कुरा भनेझै हुर्केका छेाराछेारी हुनेहरूका अाफन्त र परिवारजन माघ ।फाल्गुनकेा लगन छेाप्न वा वैशाखकेा लगन भ्याउन छेारीहुनेहरू केटा खेाज्न र छेाराहुनेहरू केटी खेाज्न गाउंघरतिर अा अाफना नसनाताहरूकेा लर्केानै लाग्छ । चन्द्रवहादुरलार्इ पनि येा दुर्इ महिना त चिट्रचिट्र पसिनानै वग्थ्येा । येा दुर्इ महिना विते त एक सालकेा चिन्ता टरे जस्तेा लाग्थ्येा । तर के गर्नु रानेाकेा वरीपरी माउरी घुमेझै चैाथी छेारीकेा विवाहकेा कुरा लिएर लमी वन्दै नसनाता अाइहाले ।
चैाथी छेारीकेा पनि विवाह गर्ने कुरामा नसनाताले ल्याएकेा घर उनले छेाड्न सकेनन् । केटा पक्षावाट माघमै विवाह गर्न प्रस्ताव अाएकेामा उनले वैशाखमा गर्ने निधेा सुनाए । केटा पक्षकाले नमानेकाले फाल्गुणमा चांहि गर्ने टुंगेानै लाग्येा । चन्द्रवहादुरलार्इ येा विवाहअ भने अव कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर दैाड धुप गर्दा गर्दै दिन वित्न थाले । अफिसवाट सामान्यतया अाउने वाटेा वांकी थिएन । नसनाता कुटुम्वसंग अघिल्लै विवाहकेा हरहिसाव फरफारक नभएकेाले मुख खेाल्न पनि सकेनन् । दुर्इचार जना साथीकेामा नगएकेा पनि हेाइन । कतिले विवाह त सामान्य हिसावले फारेातिनै गर्न पर्ला भने । कतिले अलिअलि सकेकेा हेरैाला भन्ने वचन दिए ।निरास हुंदै अाफनै कार्यालयका साथी समानका एकाउन्टेन्टसंग दिल खेालेर कुरा राखे । केही उपाय छ भने मलार्इ मद्घत गर । मेरी छेारी पनि त तिम्रै छेारी हेा नी । उसकेा घर वसार्इदिन पाए तिमिलार्इ नि पुन्यनै मिल्छ भनेर हातनै जेाडे ।
माघ महिनाकेा पहिलेा साता तुसारेा सेताम्मे भएर चैार वाटेाका छेउछाउ खनिएकेा थियेा । चन्द्रवहादुर अस्पतालकेा वेडमा भर्ना भएर सुतिरहेका थिए । थाहा पाउने अाफन्तजनहरू उनलार्इ भेट्न अाउने जाने गरि रहेका थिए । के भयेा कसेा भयेा भनेर हेर्न अाउनेहरूले जिज्ञासा राख्दा उनी केही वेाल्दैनन् । केवल छातितिर हात वढाएर दुखेकेा भाव जनाउंथे । नजिकै वसेका एकजनाले भने डाकटरसावले भने वमेाजिम एक हप्ता त वस्नै पर्छ रे । उनी सुनाउंदै थिए । काम कुरेा छिनेकी छेारीका सासु ससुरा पनि के हेा कसेा हेा भन्दै अस्पताल अार्इपुगे । भलाकुसारी गर्दै , ठीक हुन्छ , अात्तिनु पर्दैन । धेरै गाह्रेा भए फागुन हैन वैशाखमै लगन छेापुंला । उनले अाफना कुरा राख्दै भने । चन्द्रवहादुर सम्धिका कुरा सुनेर झसङग हुन्छन् । त्यसकेा जवाफमा नवेालिकनै दुवैहात छातिमाथि हल्लाउंदै हैन हैन मलार्इ ठीक हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्दछने । उनलार्इ भेट्रन अफिसकेा एकाउन्टेन्ट पनि अाकल झुक्कल अाउने गर्दछ ।
सातैा दिनकेा दिउंसेा तिर उनी हस्पिटलवाट घर तर्फ हानिन्छन् । ट्यक्सीमा लाने कुरा गर्दै थिए । मलार्इ ठीक छ भन्दै वसमै चढेर घर अाइपुगे । यसेा त उनकेा रेाग र अस्पताल भर्ना हुनुकेा कारण उनलार्इ र अरू एक दुर्इ जनालार्इ मात्र थाहा थियेा । घरमा अार्इपुगे पछि कतिपय अस्पताल पुग्न नसकेकाहरू लेाकाचार देखाउन केाही फलफुल वेाकेर ,केाही रित्ताहात भेट्न अाए । विरामी परेकेा सुनेकेा थिए । अाउला अाउला भन्दा भन्दै सकिन , कस्तेा छ अहिले भनेर अाउनेहरू मध्ये केाही सामाजिक दायित्व र मानविय व्यवहार पेाख्छन् । चन्द्रवहादुर सदा झै रवाफिलेा स्वरमा अव मलार्इ पुरै ठीक छ भनेर सेाध्नेहरूकेा उत्तर दिन्छन् ।
फागुन महिनाकेा तेस्रेा साता वाजागाजा सहित जन्तीकेा लावास्कर घरमुनिकेा वाटेा हुंदै अागनमै अार्इपुग्येा । वारिकेा पाटामा भत्तेर पकाउनेहरूकेा अंाखा जन्तिमा पुग्येा । खानेकुराले भ्याउला नभ्याउला उनीहरूले अनुमान लगाए । नसनाता कुटुम्व र घर गाउंले पनि त त्यतिकै छन् नि भन्दै अलिकति थप जेाहेा गर्न पर्ने सल्लाह गरे ।
चैाथेा छेारीकेा विवाह पनि अागन पेालेरै , छेारी ज्वार्इकेा गेाडाकेा पानी खाएरै चन्द्रवहादुरले अन्मार्इ दिए । दिनभरी मान्छेकेा भीडभाड भएकेा दुलहीकेा घर , दुलही अन्माए पछि साम सुन्यनै भयेा । चन्द्रवहादुर अागनकेा पर्खालकेा डीलमा थचक्क वस्दै लामेा सुस्केरा हाले । येा विवाह त अस्पताल भर्ना भएर अैाषधीउपचार वापतकेा रकम र ऋण सापटी लिएर समाजकेा अगाडी टाउकेा उठाए । वांकी दुर्इ दुर्इ वटीकेा कसरी गर्ने हेाला चन्द्रवहादुरले मनमनै भन्दै अली गाह्रेा भएजस्तेा भएकाले पर्खालवाट दुर्इहात टेकेर उठ्दै पिंढीकेा फलैचामा लम्पसार परेर सुते । अस्तु ।
You are currently browsing the manka kura blog archives for फ्रेवुअरी, 2010.